बुद्दि तामाङ्गले कमाएको सारा सम्पति नेप्टिले अर्कै संग लागेर सखाप पारिन , राजु परियारले गाए यस्तो मन…
लोकप्रिय गायक राजु परियार र गायिका कृष्ण परियारको सुमधुर आवाजमा बहुप्रतिभाका धनि डि.आर सुजनको लय तथा शब्द सिर्जनामा अहिले समाजमा घटेका घटनालाई समेटेर बनाइएको लोक गित परदेशी काईलो बजारमा सार्बजनिक भयको छ। भिडियो तर्फ डि.आर सुजनको निर्देशन…
लोकप्रिय गायिका मिना लामा ‘तामाङ’ सालिन अनि लजालु स्वाभावकि छिन् । काठमाडौंको स्वयम्भूमा उनको जन्म हो, तर बाल्यकाल धादिङको बैरेनीमा बिताएकी हुन् । ”आफूलाई थाहा भएदेखी गीत संगीतमा असाध्यै रुचि राख्ने मिना लामा मेलापात, घाँस दाउरा देखि गोठाला…
काठमाडौँ । ज्योतिषशास्त्रका अनुसार जम्मा १२ राशि हुने गर्दछन्। राशि अनुसार सबै व्यक्तिको स्भाव पनि फरक फरक हुने गर्दछ। आज हामी तपाईलाई तीन यस्तो राशिका बारेमा जानकारी दिदैछौँ, जुन राशिका युवती देखेर पुरुष फिदा हुने गर्दछन्। वृष राशि वृष…
दुव्लो भएका यु'वा यु'वती वि'वाह पछि मोटाएका हामीले धेरै देखेका छौं । अझ साथी भाईहरुबीच त बिहेपछि त मोटाइस् नी भन्ने प्रतिक्रिया दिने गरिएको सुनिन्छ । विवाहपछि किन मोटाउछन् त पातला मानिस यसबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । फेमिली सिस्टम एण्ड हेल्थ…
राशि, हाम्रो आसपास केहि यस्ता व्यक्ति पनि हुन्छन् , जसले आफ्नो जीवनको मुस्किल भन्दा मुस्किल परिस्थिति पनि हल गर्छन् | यिनीहरुलाई देखेर मनमा यो कुरा आउन सक्छ कि यिनीहरुमा त्यस्तो के गुण छ त ? ज्योतिषशास्त्रका अनुसार केहि राशिका व्यक्तिहरु…
शास्त्र : यी १० लक्षण भएका नारीहरु हुन्छन सौभाग्यवती
नारी परिवारमा लक्ष्मीको रुपमा मानिन्छ । माता अन्नपुर्णले उनको पोषणको वरदान दिएकी हुन् । पुरानो कथन पनि छ, ‘जहाँ नारीको पुजा हुँदैन त्यहाँ देवता पनि खुशी हुँदैनन् ।’ फरक फरक शास्त्रमा सौभाग्यवती नारीको केही लक्षण वर्णित गरीएको छ । लक्षणको…
पानी कति र कसरी पिउने ? सधैं प्रयोगमा ल्याइरहने कुरा भए पनि यो जटिल विषय हो । तर यसविषयमा विषेशज्ञहरूबीच नै एक मत छैन । वास्तवमा हाम्रो शरीरमा कति पानी चाहिन्छ भन्ने कुरा हाम्री बस्ने क्षेत्र, मौसम र शारीरिक बनोटको आधारमा पनि फरक हुने गर्छ…
शा; रीरिक स/म्बन्ध अनिवार्य र एउटा जैविक आवश्यकतासँग जोडेर व्याख्या हुने गरेको छ । आफ्नो जोडीमा शा; रीरिक स; म्बन्ध राम्रो बनाउनका लागि एक अर्काको रुची बुझ्न जरुरी हुन्छ । त्यसैले के गर्दा आफ्नो पार्टनर शा: रीरिक स; म्बन्धका लागि तयार रहेको…
नायिका नम्रता सापकोटाले आफूसँग जोडिएर आएको प्रेमको चर्चालाई नकार्न नसक्ने बताएकी छन् ।न्यूज २४ को ‘ई टक’ कार्यक्रममा बोल्दै आफू धेरै कोएक्टरसँग सँगत गर्नु परिरहेको अवस्थामा बाहिर आउने प्रेमका चर्चाहरुलाई नकार्न नसक्ने उनले बताएकी हुन्।…
लोक गायक पुस्कल शर्माको यो बर्षको पहिलो ‘दशै गित’ जसले तिन करोड नेपालिको मन रुवाएको छ,हेर्नुहोस…
काठमान्डौ। नेपाली लोक तथा दोहोरी क्षेत्रमा विशेष गरि ‘सेन्टिमेन्टल’ गित गायर दर्शक स्रोताको मन मुटुमा बस्न सफल गायक पुस्कल शर्माको नया गित सार्वजनिक भएको छ । चर्चित गाएक पुस्कल शर्माको यस बर्षको मर्मस्पर्शी गीत दाजु भाई सार्वजनिक भएको छ…